UN-ka oo loo diray baaq ka dhan ah ciidanka Itoobiya ee kamid ahayn AMISOM
Ciidamadan ayaa lagu eedeeyay in ay gudaha waddanka ka sameeyaan "dhibaatooyin kala duwan".
MUQDISHO, Soomaaliya – Qaar kamid ah xisbiyadda mucaaradka Soomaaliya ayaa maanta war-saxaafadeed wadajir ah kasoo saarey ciidamada Itoobiya ee kamid ahayn AMISOM ee jooga qaybo kamid ah dalka.
Dhinacyadda ku mideysan qoraalkan uu arkay warsidaha Garowe Online ayaa kala ah; Madasha Xisbiyada Qaran, Xisbiga Wadajir, Isbabeysiga Xisbiyada Hiigsi iyo Isbaheysiga Isbeddel doonka 1-da Luulyo.
Ugu horeyntii, waxay walaac aad u xoogan ka muujiyeen joogitaanka ciidamaddan oo ay sheegeen "in ay dhibaatooyin kala duwan geystaan"
Ciidamadan aan kamid ahayn howlgalka nabad-ilaalinta Midowga Afrika ayay ku caddeeyeen bayaanka in ay u arkaan "kuwa duulaan soo qaadey".
Gobolka Gedo ayay carabka ku adkeeyeen in "hadafka" loo geeyay ciidamadda Itoobiyaanka ah ay tahay "xasilooni daro ka abuuris iyo kala furfuridda maamulka Jubaland".
Sidoo kale, waxay xuseen in ujeedada dalka loogu soo daabulayo ciidamadda Itoobiya ee aan kamid ahayn AMISOM ay tahay "faragelinta doorashooyinka soo aadan iyo cabsi-gelinta mucaaradka".
Hogaanka taliska AMISOM ayay ku eedeeyeen in uu ku guuldareystay ilaalinta sumcadda howlgalkooda "kadib markii ay ku lug-yeeshay dedaaladii xilka looga qaadey afhayeenkii hore ee baarlamaanka".
Baarlamaanka federaalka Soomaaliya - labadiisa gole - ayay cod dheer uga dalbadeen in ay baaritaano ku sameeyaan faragelinta ciidamadda aan kamid ahayn AMISOM ee Itoobiya iyo shilkii diyaaradeed ee Berdaale.
Golaha Ammaanka iyo Nabadda ee Midowga Afrika ayay sidoo kale cod dheer kaga codsadeen in uu dib u eegis ku sameeyo "faragelinta sharci daradda ah ee ciidamadda Itoobiya kawadaan Soomaaliya taas oo waxyeeleyneysa sumcadda howlgalka AMISOM".
Si lamid ah golaha ammaanka Qaramadda Midoobay ayay ku booriyeen in uu baaro "joogitaanka sii kordheysa ee ciidamadda Itoobiya gudaha Soomaaliya taas oo xadgudub ku ah qaraarka 733 ee soo baxay 1999 kuna saabsan cunaqabateynta hubka Soomaaliya".
Kenyan ayaa lagu qaadey weeraro culus oo uu kamid yahay midkii Westgate Mall 2013 tan iyo markii...
Ciidamo ajnabi ah oo lagu wareejinayo amaanka Xarunta Aqalka Sare [Akhri Sababta]
Soomaliya 24.03.2018. 13:47
Soomaaliya: Shabaab oo 5 qof ku dishay Sh/hoose
Soomaliya 03.01.2018. 12:05
Qorshaha liddiga ku ah Soomaaliya oo ay Kenya u raadineyso kursiga QM
Afrika 12.08.2019. 14:40
QM oo cambaareysay weerarkii lagu dilay wasiir ku xigeenkii Shaqada
Soomaliya 24.03.2019. 14:47